Isikhokelo sokuthandaza iirosari Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Umzuzwana wokuthula kuxa uthandaza, ke ngoko, sikunika oku Isikhokelo sokuthandaza irosari, ke unokuzisebenzisela wena okanye, ukwaba nabakufutshane kuwe.
1 Isikhokelo sokuthandaza iirosari, ukwazi indlela yokuthandaza
1.1 Yintoni efunekayo ukwenza irosari?
1.2 Yenziwa njani irosari?
1.2.1 Umzuzu wokuqala
1.2.2 Umzuzwana wesibini
Isikhokelo sokuthandaza iirosari, ukwazi indlela yokuthandaza
Ukuthandaza yinto ebaluleke kakhulu, ethetha ukuzibophelela nokholo, kuba, ngalo mzuzu, umntu kufuneka anikwe ukufuna ukuthandaza, kwaye, ukuze acace malunga nento ethethwayo neyenziwayo, oko kukuthi, , Ungathandabuzi okomzuzwana nawaphi na amagama anikwe uThixo. Sisenzo esinokwenziwa kwinkampani, nangona kunjalo, abantu banokuzenza bodwa bebodwa, apho unxibelelwano lukukucamngca kunokuphindaphinda.
Xa kuthandazwa, kusetyenziswa imithandazo, ekunokuthiwa ibhulorho phakathi komntu noThixo; indlela yokumanyelwa okanye yokubulela ngezinto. Umthandazo sisenzo esipheleleyo, kukho iintlobo ezahlukeneyo kwaye nganye nganye ifuna into ngokwayo.
Abantu bathandaza ukuze babulele okanye babuze, sizama ukunxibelelana nalawo mandla ahamba ngaphaya kwethu, umzekelo wabo, uThixo. Sifuna ukuba uThixo asimamele kwaye asenzele inceba, acele ukuxolelwa okanye athi sinombulelo ngento ayenzayo.
Nokuba yeyiphi na inkolo, indlela yonxibelelwano yokomoya iphantse yafana, ifuna ukuthandazela ukunxibelelana kunye nomjelo, ukuze sikwazi ukuzibonakalisa noThixo okanye nonyana wakhe ngandlela thile. Incwadi echaza lo msebenzi ngokweenkcukacha yiBhayibhile, kodwa libali lokomoya kunokuba libhalwe ngesandla kunye nemithandazo eyimfuneko yokwazi ukuthandaza.
Umbhalo wesandla osebenza njengesikhokelo somthandazo kwaye, ngamafutshane, usifundisa ngobomi bukaNyana kaThixo, yirosari. Incwadi emfutshane eneenkcukacha ezithile ukuze ukwazi ukuthandaza, nokuba kungokucela okanye ukubulela.
Yintoni efunekayo ukwenza irosari?
Kukho izinto ezisisiseko ezingenakusilela xa uthandaza iirosari, eziyimfuneko ukuze ungenzi iimpazamo kwaye yonke inkqubo yenziwa ngokufanelekileyo. Irosari yincwadi ebhaliweyo ebalisa ngobomi bukaYesu, ngokwembono kanina kwaye, ngaphezulu kwako konke, izixhobo ezinje ngemithandazo zisetyenziselwa ukudibanisa inkqubo yobuKrestu ukuze yazi iNkosi uYesu Krestu.
Into yokuqala efunekayo ukuthandaza i-rosari, nangona ibonakala icacile, yincwadi enegama elifanayo, kuba iya kuba sisikhokelo senkqubo yokomoya, inika imithandazo kunye neempendulo zeemeko mhlawumbi ezingazokwaziwa Nika okanye uthandaze njani. Incwadi iqulethe yonke inkqubo, ukuba wenzeni kwaye yintoni ongamele uyenze, thandaza nendlela yokuthandaza.
Enye yezinto ezenziweyo, kusetyenziswa incwadi, kukuthandaza. Indlela ithandaza ngayo ixhomekeke kwinxalenye oshiye kuyo irosari, kodwa kukho amaxesha apho kuya kufuneka ugcine ingxelo yesixa semithandazo ethile oyenzileyo, umzekelo, zingaphi ii "Hail Marys" ezenziweyo ukuze Nika uGloria okanye ukuba sele eyokugqibela iMfihlakalo.
Ibhola nganye yomqala enayo yindlela yokuphatha ukubala, ngale ndlela, unokwazi ukuba kungakanani okushiyekileyo ukuze ukwazi ukwenza umthandazo okanye umthandazo. Kuyafaneleka ukuba xa uthandaza nomnye umntu, omnye waba babini ngulowo ugcina umkhondo wenani leebhola eziqhubela phambili kunye nezo zishiyekileyo ukugqiba.
Yenziwa njani irosari?
Ngoku, ukuba unazo zonke ii-macundales kunye nezixhobo, ungaqala ukuthandaza ngaphandle kwengxaki. Into yokuqala kukuba ukwicala elithe cwaka, uyazi ukuba ixesha lakho noThixo alinakuphazanyiswa.
Isinyathelo sokuqala sokwenza i-rosari ukuqala ngesiphambano, ukwenza uphawu lomnqamlezo omncinci; ibunzi, umlomo nesifuba. Emva koko, umnqamlezo kufuneka wenziwe, ngobukhulu obukhulu kancinane, ukuqala entloko, esifubeni, egxalabeni lasekhohlo nasegxeni lasekunene, ngaloo ndlela kunikwa indlela yokuhlanjululwa nokulungela ukuthandaza.
Umthandazo kufuneka usetyenziswe, ongowokuvuma izono ngenjongo yokuzihlambulula, ngaloo ndlela ufuna ukuxolelwa phambi koThixo, uxolise ngokungazenzi izinto ezintle, ngaloo ndlela ufezekise uxolo ngayo yonke loo nto. Kuya kufuneka unyaniseke kakhulu kuyo yonke le nkqubo, ukuze yonke ibe yendalo kwaye yenzeke.
Ke, kuqala nge-Gloria, ukunika amandla kwigama leNkosi nobungangamsha bayo, siyibulela ngayo yonke into eyasenzela yona. Ekupheleni kweGloria, kufuneka sibone ukuba loluphi usuku kwaye senze iimfihlakalo.
Emva kokugqiba umzuzu wokuqala, iimfihlakalo ezichukumisa loo mini kufuneka zenziwe, ukuze sikwazi ukwazi inxenye yento uYesu ahamba kuyo, ngalo mzuzu wobomi bakhe apho imfihlakalo ifunyanwa khona, ukusukela, iimfihlakalo Zifumaneka encwadini, ngamanqanaba uYesu awayemelwe kukuwanyamezela kubomi bakhe bonke.
Ungayenza le nkqubo wedwa okanye uhambe nayo, ke ngoko, yonke into ixhomekeke kwintuthuzelo yakho kunye namandla kunye nomntu oza kuthandaza, kodwa ungayenza wedwa ngaphandle kwengxaki, into ebalulekileyo kukuba uyayenza le nkqubo. Emva kwemfihlelo nganye kufuneka uqalise uBawo Wethu, oza kukhatshwa ngu-10 "UThixo akusindise", ube ngumnikelo weNtombikazi enguMariya, ukuze uThixo wokugqibela akusindise, iGloria kufuneka yenziwe, inikele njengomphumo umzuzu.
Okokugqibela, yonke inkqubo ivaliwe ngemithandazo yokugqibela eyalelwa yirosari, isenza ukuphindwaphindwa kunye neendumiso ezithile ezihambelanayo, ezivumela ukukhula komthandazo kunye nomzuzu. Iphela ngomnqamlezo kwaye iphele ixesha lomthandazo.
Ukuba ulithandile inqaku, ndiyakumema ukuba ufunde: "Iimfihlakalo zangoLwesithathu". Ndiyazi ukuba uya kuyithanda.